Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mampanantena traikefa mpandeha tsy manam-paharoa ao amin'ny seranam-piaramanidin'i New Istanbul ny fanavaozana ny teknolojia
Rehefa mitombo ny fifamoivoizana amin'ny rivotra ary mamorona làlana vaovao, ny seranam-piaramanidina dia mila mizatra amin'ny fepetra takiana ary ho lasa hendry sy mavitrika amin'ny fanovana ny dinamika fiaramanidina sy ny filan'ny mpandeha. Ny tanjon'ny seranam-piaramanidina marani-tsaina dia ny hampahafantatra ireo rafitra sy ny fizotrany amin'ny fomba nomerika, mifandray, ampidirina amin'ny faharanitan-tsaina ary tsotra amin'ny fidiran'ny mpandeha. Hanova tanteraka ny fomba fitantananantsika seranam-piaramanidina sy manidina ny teknolojia marani-tsaina. Hanatsara ny traikefan'ny mpandeha izy ireo ary hampihena ny haavon'ny fihenjanana. Raha jerena ity fampahalalana ity dia notsidihina avokoa ny seranam-piaramanidina mandroso rehetra eto an-tany ary nangonina ny vaovao, koa amin'ny maha İGA, dia ampiharintsika ao amin'ny seranam-piaramanidina vaovao ireo vahaolana teknolojika rehetra ireo.
Ao amin'ny seranam-piaramanidina vaovao any Istanbul (INA), hampiasa ny fandrosoana farany amin'ny teknolojia izahay. Ny rindranasa finday İGA dia manan-danja tokoa amin'ny fanomezana fampahalalana ho an'ny mpandeha sy hanatsara ny diany. Amin'ny alàlan'ny fampidirana programa mahatoky amin'ny fampiharana finday dia hampiasaina amin'ny fitantanana fampielezan-kevitra amin'ireo mpivarotra sy fivarotana sakafo sy zava-pisotro.
Singa iray manan-danja ihany koa ny fampiasana ny Internet zavatra ahafahan'ny mpandeha mangataka sy mahazo vaovao mifandraika amin'ny toerana misy azy ireo ao amin'ny seranam-piaramanidina. Io dia hahafahan'ny mpandeha manome hevitra amin'ny fotoana tena izy. Amin'ny fahafantarana ny toerana misy ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina dia hanome fanampiana avy hatrany ny mpiasa.
Ny fampiasana Internet of Things sy angon-drakitra lehibe dia tena zava-dehibe amin'ny fitantanana mavitrika ny fivezivezena amin'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina, manome fomba fijery tena izy momba ny filaharana amin'ny fiarovana, fifindra-monina ary ny lafiny hafa eo amin'ny seranam-piaramanidina - vaovao azontsika omena ny mpandeha amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Ho an'ireo mpandeha mampiasa seranam-piaramanidina vaovao İstanbul, fanatsarana afovoany iray ny fanatsarana foibe. Io dia ahafahan'izy ireo manamarina ao anaty valiziny haingana sy mora. Tsotra ny rafitra: rehefa avy nijery an-tserasera na teny amin'ny kioska seranam-piaramanidina ianao, ny mpandeha dia afaka mandanja ny kitapony sy hampiasa ny pasiterany ao amin'ny kioskan'ny kitapo misy azy ao amin'ny seranam-piaramanidina mba hamoronana marika ho an'ny kitapony. Avy eo ireo mpandeha dia hoentina mankany amin'ny faritra voatondro harona izay ahafahan'izy ireo mamindra ny valizy.
Rehefa vita ny fizahana fizahana fizahana dia manana mpandeha passeport biometrika afaka mampiasa vavahady e-passport mandeha ho azy, manalavitra ny tsipika lava, ary mamakivaky haingana kokoa ny fifehezana ny pasipaoro.
Ny teknolojia koa dia manampy amin'ny fivarotana fivarotana, mamorona traikefa tsy hay hadinoina. Rafitra hologram 3-D, sarety fiantsenana marani-tsaina miaraka amina laharam-pahefana, mpampiasa vola-fisoratana anarana ary ny firaketana ny mpanjifa elektronika no ampiasaina. Ny rindranasa "Magic Mirror", ohatra, dia hahafahan'ny mpanjifa mahita ny fomba fijerin'ny famantaranandro, akanjo na makiazy azy ireo nefa tsy manandrana azy ireo ara-batana.
Ary koa, izahay dia manangana Carpark manan-tsaina miaraka amin'ireo rafitra mandroso indrindra toy ny Parking Guide miaraka amin'ireo fakantsary manokana. Hahafantatra ny fiara avy ao amin'ny Plate Lisitra izahay ary hanoratra ny toeram-piantsonan'izy ireo ao amin'ny rafitra informatika. Avy eo, afaka mampahafantatra ny vahinintsika mifanaraka amin'izany izahay, rehefa manara-maso ny kaody fampiasa amin'ny tapakila amin'ny alàlan'ny findainy. Miaraka amin'ny haitao fikarohana ny fihetsiketsehana, hanomboka ny fandraisam-peo raha sendra misy ny fihetsiketsehana toy ny fianjerana, fandrobana na fihetsika tsy mendrika.